प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको पत्र : बाँचेछु भने काममा फर्किन्छु
जनक अधिकारी सोमबार, साउन ४, २०७८, १९:११
आफ्नै उमेर समूह (३० देखि ५० वर्षसम्म) का व्यक्ति बढीभन्दा बढी संक्रमित भइ मृत्यूवरण गरिरहेको अवस्था थियो। यो सबै थाहा पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन कति छट्पटिएको थियो होला? र, परिवारका सदस्य कति आत्तिएका थिए होला?
मलाई थाहा छ, अबको तीन मेरा लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछन्। म क्रमशः निको हुँदै घर जाने अवस्था आउन सक्छ। अथवा, आइसोलेसनबाट अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, वार्ड, आईसीयू र भेण्टिलेटर हुँदै आर्यघाटमा मेरो अन्तिम बिदाइ पनि हुनसक्छ। मबाट मेरो परिवारमा समेत कोभिड–१९ सरेको छ। उनीहरुको अवस्था के हुने हो थाहा छैन।